सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएर पिडित नाबालिक गायीकाले दिईन् यस्तो बयान ! – Nep Stok
सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएर पिडित नाबालिक गायीकाले दिईन् यस्तो बयान !
फागुण २१, २०७८ शनिबार 2955
बाँसको खाँबो गाडेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको बाहिरपट्टि डोरी टाँगिएको छ । युट्युबर फर्किएपछि दमौलीमा प्रहरी कार्यालयको पारिपट्टि रहेको न्यु मार्फाली होटल एन्ड लज सुनसानजस्तै छ । प्रहरी कार्यालयबाहिर ब” ला’त्कार आ” रोपितको पक्षमा ना”राबाजी गर्ने कथित अभियन्ता छैनन् ।
नाबालिकालाई ज”ब”र्जस्ती क”रणीको अ”भियोगमा कलाकार पूर्णविक्रम शाह (पल शाह) दमौलीको हिरासतमा आइतबारदेखि थुनामा छन् । उनी थुनिएदेखि दमौलीमा भीड जम्मा भयो । काठमाडौंदेखि आएका युट्युबर र अभियन्ता बास बस्दा प्रहरी कार्यालयवरपरका होटल र रेस्टुरेन्टले ४–५ दिन राम्रै व्यापार गरे । बिहीबार उनीहरू फर्किएपछि भने प्रहरी कार्यालयवरपर सुनसान देखियो । शुक्रबार काठमाडौंबाट एक युवतीमात्रै शाहलाई भेट्न आइन् ।
पीडित ना”बालिकाले शुक्रबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान दिइन् । उनले जाहेरीमा उल्लेख भएको व्यहोरालाई बल पुग्ने गरी बयान दिएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले बताए । उनका अनुसार पीडित आफ्नो बयानमा अडिग छिन् । कार्यालयले अन्य साक्षीको बयान लिइरहेको छ । पीडितका तर्फबाट पूर्वी नवलपुर प्रहरी कार्यालयमा पनि शाहविरुद्ध ज”बर्ज”स्ती करणीको उजुरी परेकाले त्यहाँ पनि सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान हुनेछ ।
कलाकार दुर्गेश थापा र सम्राट चौलागाईंले बुधबार दमौली आएर पीडितकै पक्षमा बयान दिइसकेका छन् । प्रहरीले हिरासतमा रहेका शाहसँग बयान लिए पनि उनले आरोप स्वीकार गरिसकेका छैनन् । उनले म्युजिक भिडियो सुटिङका क्रममा पीडितसँग एउटै घरमा बसे पनि शारीरिक स”म्पर्क नभ”एको ब”यान दिएका छन् । पी”डितको स्वास्थ्य परीक्षणमा भने नाबालिकाको क”न्याजाली च्या”तिएको प्रतिवेदन आइसकेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रवक्ता डीएसपी युवराज खड्काले घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको बताए । पी”डित र आ”रोपि”तको बयानअनुसार अनुसन्धान अधिकारीले प्रमाण जुटाउने, पी”डितलाई कागज गराउने, जाहेरीवाला (पीडितका बुबा) लाई सोधपुछ गर्ने, घटना विवरण कागजमा संलग्न भएका मानिसको भनाइलाई हेर्ने र विश्लेषण गर्ने काम गर्छन् । अनुसन्धान भइसकेपछि बढीमा २५ दिनभित्र अदालतमा पेस गर्नुपर्छ । शाह आइतबारदेखि अदालतबाट ७ दिन म्याद थप गरी थुनामा छन् । शनिबार बिदा भएको र अनुसन्धान नसकिएकाले आइतबार पुनः म्याद थप हुनेछ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ अनुसार कुनै महिलालाई निजको सहमतिबिना र १८ वर्षमुनिकालाई सहमतिमा पनि करणी गर्न मिल्दैन । उक्त कर”णी ब” ला”त्कार ठहरिन्छ ।
जन्मदर्ताअनुसार पीडित नाबालिकाको जन्म २०६२ साउन ३ मा भएको देखिन्छ । २०७८ वैशाख १४ मा तनहुँको दुलेगौंडामा अन्तिम करणी हुँदा उनको उमेर १५ वर्ष ८ महिना ९ दिन छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १९ को ३ (ग) बमोजिम १४ देखि १६ वर्षसम्मका नाबालिकालाई क”रणी गरेको अवस्थामा १२ देखि १४ वर्षसम्मको कैद सजाय हुन्छ ।
Prevएकल महिला भएर बाच्न धेरै गाह्रो रैछ- रिना केसी
Nextअब देशभरी पेट्रोल देशभरी नपाइने?भर्खरै आयो यस्तो खबर।
भखरै ओखलढुंगामा जिप दुर्घटना, एक जना महिलाको मृत्यु, सात जना घाइते